Yakakwira frequency induction ichiona mota dzemhangura dzidziya exchanger mapaipi
Mugadziri wemidziyo anoda kuti iite otomatiki mukuisa kwavo maitiro ekuisa mari. Chinangwa chavo ndechekugona kupinza mota zvichidziya mapaipi epombi. Takaita bvunzo dzinoverengeka kuti tisarudze zvakanaka induction kupisa zvigadzirwa izvo zvinogona kukodzera zvavanoda.
Iyo HLQ yakazvigadzirira induction brazing system inogona kushandiswa kune yavo chaiyo maitiro
Iyo DW-UHF-20KW inouya yakashongedzerwa ne20kw induction yekupisa sisitimu Iyi simba induction kupisa mhinduro inogona kunyatsobatanidzwa mumutsara wekugadzira.
Zvishandiso: DW-UHF-20KW induction brazing muchina
Nguva: 12 sec.
Zvishandiso: Mapaipi emhangura
Ruoko rwe robotic runofamba zvine hunyanzvi hwakanyanya uye rwunobvumira kudzora kwakakwana pamusoro pechiitwa. Iyo alloy mhete inonyungudika uye nekunyatso kupenya majoini ese. Imwe mubatanidzwa iri kuvharidzirwa kwemasekondi gumi nemaviri.
Categories Technologies Tags kuchena kwemotokari exchanger, brazing mhangura exchanger, yendarira kupisa exchanger mapipi, kuburitsa kusungurudza, kutengesa mabhiza motokari, induction brazing mhangura exchanger, induction ichipisa kupisa exchanger, induction kupisa mhangura Post navigation